कस्ताे बन्दैछ एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको संरचना ?
काठमाडाैं, ११ चैत । नेकपा एमाले र माअाेवादी केन्द्रकाे एकीकरणपछि पार्टीकाे संरचनामा पनि अामूल परिवर्तन हुने भएकाे छ । विधान मस्यौदा कार्यादलमा भएको छलफलमा शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, प्राध्यापक, चिकित्सक, निजामति कर्मचारीलगायत पेसागत संगठनलाई एउटै महासंघ
कर्मचारीले मानेन् श्रममन्त्री बिष्टको निर्देशन् !
काठमाडौं, ११ चैत । दरबन्दीभन्दा बढी रहेका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको निर्देशन कर्मचारीले उल्लंघन गरेका छन् । उनीहरुले मन्त्रीको निर्देशनविपरीत शुक्रबार पनि हाजिर गरे । निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रेमबहादुर पेसारले कर्मचारीलाई नियमित रुपमा हाजिर गराएर काममा लगाएको बताए ।
काठमाडौं, १० चैत । सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दासमेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । संघीय समाजवादी फोरमले पार्टीका तर्फबाट मन्त्रीको नाम नदिएपछि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
काठमाडौं, ८ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत तेस्रो साता भारतको राजकीय भ्रमणमा जाने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनी अगामि चैत २३ देखि २५ सम्म तीन दिने भ्रमणका लागि भारत जाने तयारी भएको हो। यद्यपी भ्रमणको आधिकारिक मिति भने परराष्ट्रले अझै सार्वजनिक गरेको छैन।
राजनीतिक परामर्शमा जुटे प्रधानमन्त्री
काठमाडाैं, ७ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७ वटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीलाई राजनीति परामर्शका लागि बोलाएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडाैं, ६ चैत । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशका आचरण शुद्ध राख्न उनीहरूले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याइने घोषणा गरेका छन् । केही न्यायाधीशका आर्थिक आचरणका कारण समग्र
स्वैच्छिक अवकाशमा सेन्सरः लालबाबु
काठमाडाैं, ६ चैत । डिभी–पिआरधारी कर्मचारीलाई जागिर छोडाएर अघिल्लोपटक चर्चामा रहेका लालबाबु सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फर्किएका छन् । अब लालबाबुको प्रथम परीक्षा– नौ हजार कर्मचारीलाई ३० अर्ब बुझाएर घर पठाइन्छ कि जनसेवामा प्रदेश र स्थानीय तहमा ?
तीनवटै राप्रपालाई मिलाउने प्रयास - 'चिया बगानमा कफी पाईन्छ त ?'
काठमाडाैं, ६ चैत । संसदीय निर्वाचनपति लजास्पद हार बेहोरेका राप्रपा नेपाल, पशुपतिशमशेर नेतृत्वको राप्रपा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीनिकट राप्रपा राष्ट्रवादीका नेतासँगको भेटमा पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रले प्रश्न सोध्दै घुमाउरो शैलीमा भन्नुभयो, - तपाईहरुले पार्टीलाई यसै गरी अघि बढाउने सोच भए मेरो विकल्प अरु पनि हुन सक्छ ।
उपराष्ट्रपतिमा पुनः नन्दबहादुर पुन
स्वैच्छिक अवकाश राेक्ने तयारी, प्रधानमन्त्री र समान्य प्रशासनमन्त्रीको धारणा यस्ताे
काठमाडाैं, ४ चैत । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षक प्याकेज ल्यायो । एकमुष्ट सात वर्षसम्मको पेन्सन सुविधा एकैपटक बुझेर घर जान पाइने भएपछि सेवाअवधि लगभग सकिन लागेका कर्मचारीलाई भनेजस्तै भयो ।